कसरी अफ गर्ने, पुन: सुरु वा iPhone X | सक्रिय गर्नुहोस् आईफोन समाचार
चरम न्यूनतमता, त्यो यही हो कि कपर्टिनो कम्पनीले आईफोन X लाई पूरा गर्न खोज्यो, यति धेरै कि हामी होम बटन बिना नै रह्यौं जुन यति धेरै आईफोन टर्मिनलहरूको विशेषता थियो। हुन सक्छ यो नै हुन सक्छ, अब आईफोन एक्स को संचालन र गेस्चर बान्की को बारे मा निश्चित शंका उत्पन्न हुन, तर Actualidad आईफोनमा हामी तपाईंलाई केबल दिन आएका छौं।
आईफोन एक्स को बन्द गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईलाई कहिले थाहा हुँदैन आज हामी तपाईंलाई देखाउन जाँदैछौं कि कुन मार्गहरू बन्द गर्न, पुनःस्टार्ट गर्न वा तपाईंको आवश्यकता अनुसार आईफोन एक्स सक्रिय पार्न। यदि तपाईंसँग आईफोन एक्स र धेरै शंकाहरू छन् भने तपाईंले यो सानो तर आवश्यक ट्यूटोरियल याद गर्नु हुँदैन।
यी तीन कार्यहरू आईओएस मा सामान्य हुँदैन, त्यसैले हामी केहि शंका हुन सक्छ जब यो साधारण कार्यहरू गर्ने कुरा आउँछ, हामी त्यहाँ जाऔं।
म कसरी बन्द गर्न वा मेरो आईफोन एक्स पुनःस्टार्ट गर्न सक्छु? आईफोन एक्स बन्द गर्न, आश्चर्यजनक रूपमा, हामीले पावर बटन (दायाँ तर्फ) र भोल्यूम + बटन (बायाँ) प्रेस गर्नुपर्नेछ करीव seconds सेकेन्डको लागि, जब सम्म यो स्क्रिनमा देखाउँदैन। "बन्द गर्न स्लाइड", त्यसो भए स्विच स्लाइडिंग टर्मिनल पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ।
म कसरी आईफोन एक्स बन्द गर्न सक्दछु? कहिलेकाँही फोन फस्न सक्छ, यसको लागि हामीले "जबरजस्ती बन्द" प्रयोग गर्नुपर्नेछ जसको कुञ्जी संयोजन काफी रोचक छ। हामीले भोल्युम माथि थिच्नुहोस् र छोड्नु पर्छ, भोल्यूम तल थिच्नुहोस् र छोड्नुहोस् र पावर बटन होल्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि एप्पल ताल देखा पर्नेछ र टर्मिनल रिस्टार्ट हुनेछ।
म कसरी यसलाई अनलक नगरी आईफोन स्क्रिन सक्रिय गर्ने? यो गर्नका लागि तपाईले स्क्रीनमा जहाँसुकै सानो दुई सेकेन्ड टच बनाउनुपर्नेछ जब यो लक हुन्छ र हामी लक स्क्रीन देख्दछौं।
ती दुई एकदम उत्सुक सर्टकटहरू हुन्समान बटनहरू माध्यमिक कार्यहरू जस्तै स्क्रिनसटहरू सबै प्रकारका लागि प्रयोग गरिन्छ। हामी फेरि आशा गर्दछौं कि हाम्रो ट्यूटोरियलले तपाईंलाई हतारबाट बाहिर निस्कन मद्दत गरेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी अफ गर्ने, पुन: सुरु वा आईफोन एक्स उठाउन
स्क्रीन सक्रिय गर्न तपाईलाई दुई सेकेन्ड टचको आवश्यक पर्दैन, केवल "सामान्य" स्क्रिनमा टच।
एक साधारण स्पर्श संग सहि पर्याप्त छ। कुनै लामो प्रेस नदिनुहोस्।
एप्पलले आईफोन एक्सको "जलेको स्क्रिन" को बारे मा पहिले नै चेतावनी दिन्छ